Mividiana sticker sticker ho an'ny vehivavy mandritra ny fotoana tsy tantera-drano ho an'ny vehivavy - Fandefasana maimaim-poana ary tsy misy haba | WoopShop®
Stiker Tattoo tsy maharitra tantera-drano ho an'ny vehivavy
$3.99 Regular vidiny $5.99
Color 20-FF082 21-XQB289 18-XQB287 19-FF084 16-XQB286 17-XQB222 14-TH391 15-XQB284 12-XQB270 13-XQB283 10-XQB267 11-XQB269 08-XQB234 09-XQB266 06-FF080 07-XQB264 04-XQB261 05-XQB262 02-FF073 03-XQB154 01-XQB152 24-XQB318 25-XQB165 22-XQB290 23-TH173 26-XQB114 27-XQB115 28-XQB331 29-XQB332 30-XQB333 31-XQB343 32-XQB344 33-XQB342 34-XQB349 35-XQB334 36-XQB338 37-XQB339 38-XQB357 39-XQB356 40-XQB340 41-XQB341 42-XQB345 43-XQB350 44-XQB351 45-XQB360 46-XQB355 47-XQB354 50-XQB215 51-FF078 49-XQB136 52-FF086 48-TH392
Sticker tatoazy tsy maharitra tantera-drano ho an'ny vehivavy - 20-FF082 tafaverina ary halefa raha vantany vao tafaverina ny tahiry.
Isan'ny sombin-javatra: Unité iray
Karazana: Tatoazy vonjimaika
Size: 21X11.4cm / 8.26 "X4.48"
Afaka ampiasaina amin'ny hoditra, keramika vy, ambonin'ny vera.
Drafitra natao pirinty, loko marevaka ary toa tena tatoazy.
Safidy tena tsara toy ny tatoazy tsy maharitra, makiazy amin'ny vatana ary koa afaka manarona ny fery amin'ny vatana.
Akanjo mora ary madio madio.
Ny fomba fampiasana:
Miorina amin'ny fanavaozana 62
Jereo tsara. Fandefasana haingana. Hanao rahampitso aho, saingy mieritreritra aho fa tsy hisy olana)
Tsy mbola nihazakazaka aho fa tonga ara-potoana
Ny mpividy dia mandresy antsika 4.9 / 5 miorina amin'ny fanamarihana 127711.
Baoty hoditra hoditra tena mafana ho an'ny lehilahy
Akanjo vehivavy matevina vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra misy fehikibo
Araka ny famaritana, tiako izany
Roa herinandro alohan'ny ekb! Tena afo ny double! Hanafatra loko hafa aho